Students from Zimbabwe - Study muUkraine. Ukrainian Munopinda Center
Vadzidzi kubva Zimbabwe kuwana mavhiza zvavo kubva kuUkraine Embassy in South Africa. Vadzidzi vanogona kushandisa paIndaneti kana vanogona kutaura mumiririri yedu muZimbabwe nokuda admissions uye vhiza muitiro.
8. Original zvokurapa kuongororwa chitupa vanopupurirwa parutivi yepamutemo muviri (inofanira chakasimbiswa Ministry of Foreign Affairs of Zimbabwe OR vanofanira kuva Apostille chisimbiso) – (Embassy achaita kushandura uye akagadzirisa gwaro iri)
P.S.: Vanodzidza Zimbabwe vanosangana yakawanda nematambudziko kuwana mavhiza ndokusaka takasarudza kuronga vhiza mabasa chete nokuda kwedu vadzidzi. Zvino vadzidzi haazorambi nematambudziko uye achawana Mavhiza avo nyore.